Matteo Darmian oo ka tagaya Man United, kooxdee ayuu ku biirayaa?
Wednesday, March 20th, 2019 - 17:07:18
Sunday April 15, 2018 - 15:56:20 in Wararka by
Xidiga kooxda Manchester United Matteo Darmian ayaa si joogta ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo Manchester United xilli ciyaareedkan. Tani ma ahan wax la yaab leh Darmian ayaa kaliya labo kulan oo Premier League ah ku bilowday xilli ciyaareedkan.
Darmian ayaa United kaga soo biiray Torino sannadkii 2015, iyagona kuso qatay £ 12.7million, lakiin waxa uu ku dhibtoday inuu helo boos joota ah iyado xidigaha Ashley Young, Antonio Valencia iyo Luke Shaw ay booska kala bexeen.
Waxaa si aad ah loo sheegay inuu dib ugu laabanayo Serie A, iyadoo Roma lala xiriirinaayo, si kastaba ha ahaatee waxa ay u muuqataa in Juventus ay tahay kooxda uu ku biiri lahaa xagaaga soo aadan. Sida laga soo xigtay ‘Tuttosport’, Darmian ayaa heshiis la gaaray madaxda Juventus, isagoo u sheegay inuu diyaar u yahay inuu ku biiro kooxda Talyaaniga dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Beppe Marotta ayaa haatan hoos udhigtay heshiiskii uu kula saxiixday United, inkastoo ay u muuqato mid aan u badneyn in Red Devils ay joojineyso inuu baxo, xilli ciyaareedkiisa oo aan ciyaarin.